Dagaal ka dhacay Gobolka Galgaduud – STAR FM SOMALIA
Dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya AMISOM iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan Gobolka Galgaduud, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhacay deegaanka Ceel-Hareeri, halkaasoo ka soo sheegay inay duulaan ku qaadeen Ciidamada huwanta.
Saraakiisha ciidanka milateriga ee ku sugan Galgaduud ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen illaa 7-dagaalame, isla markaana dagaalka ahaa mid aad u xooggan.
Al-Shabaab ayaa qoraalo ay soo dhigeen baraha Internet ee taageera ayaa sheegay in dagaalka ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka dowladda.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka socda Itoobiya ayaa muddooyinkii u dambeeyay dhaq dhaqaaqyo ciidan ka waday deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 29-06-2016